10 ဥရောပရှိအလှဆုံးပန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးပန်းများ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 01/01/2021)
ဥရောပမှာအံ့ wonderful စရာကောင်းတဲ့အထင်ကရနေရာများစွာရှိတယ်. တိုင်းထောင့်နောက်ကွယ်မှ, သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ရှိတယ်. စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်ထူးခြားသည့်မြင်ကွင်းများအနက်တစ်ခုမှာခမ်းနားသောစမ်းရေတွင်းဖြစ်သည်, ငါတို့လက်ရွေးပြီ 10 ဥရောပ၌အလှဆုံးစမ်းရေတွင်း၏.
ဂီတ, သာမန်ထက်, ဥရောပရဲ့စမ်းရေတွင်းများအံ့မခန်းဖြစ်ကြသည်. ပဲရစ်မြို့မှဘူဒါပတ်စ်အထိဖြစ်သည်, မြို့လယ်ခေါင်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်းပေါ်မှာ, ဤ 10 အံ့သြဖွယ်စမ်းရေတွင်းတစ်တွင်းအလည်အပတ်ခရီးလုံးဝတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်.
1. ရောမမြို့ရှိ Trevi စမ်းရေတွင်း
ရောမတွင်အကြီးဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးစမ်းရေတွင်းမှာထရီဗီစမ်းချောင်းဖြစ်သည်. ဤခမ်းနားသောစမ်းရေတွင်းသည်ယိုဖိတ်သွားသည် 2,824,800 နေ့စဉ်ရေကုဗပေ. လည်း, ရောမခေတ်က၎င်းသည်ဗဟိုရေအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, သငျသညျသုံးလမ်းများ "Tre Vie" ၏လမ်းဆုံပေါ်တွင်သုံးလမ်းများစမ်းရေတွင်းပေါ် Trevi စမ်းရေတွင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
အမှု၌သင်တို့ကိုမသိခဲ့ပါ, Trevi စမ်းရေတွင်းသည်ဥရောပ၏အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်တစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, ဥရောပရှိအလှဆုံးစမ်းရေတွင်း၌ရုပ်ရှင်များစွာပါ ၀ င်သည်ကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ, ကြိုက်တယ် ရောမအားလပ်ရက်.
ရောမမြို့၌ Trevi စမ်းရေတွင်းသည်ဘယ်မှာရှိသနည်း?
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Trevi စမ်းရေတွင်းသည်စပိန်ခြေလှမ်းများမှ ၁၀ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်. Barberini ဘူတာသို့လည်းသင်လမ်းရထားစီးနိုင်သည်.
2. Trocadero စမ်းရေတွင်း
Trocadero စမ်းရေတွင်း၏ထူးခြားပြောင်မြောက်သောအချက်မှာအလယ်ဗဟိုရှိဝါဆောရေကန်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အင်တုံပုံစံဖြစ်သည်, နှင့် 12 ပတ်လည်စမ်းရေတွင်း. ထိုကွောငျ့, Eiffel Tower နှင့်စမ်းရေတွင်း၏မြင်ကွင်းသည်လုံးဝမော်ကွန်းဖြစ်သည်.
အဆိုပါ လှပသောဥယျာဉ်များ နှင့်စမ်းရေစပိုင်းတွင် Trocadero Palais ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, သူတို့ဖန်တီးခဲ့ကြသည် 1878 တစ်လောကလုံး Exposition နှင့်အတူ. Seine မြစ်နှင့်မျက်နှာ, နောက်ခံ Palais du Chaillot နှင့် Eiffel Tower ၏ရှေ့တွင်ဖြစ်သည်, အဆိုပါ Trocadero စမ်းရေတွင်းသည် ပဲရစ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပျော်ပွဲစားပွဲချင်းပြီး, နှင့်ဥရောပ.
Trocadero ဥယျာဉ်များနှင့်စမ်းရေတွင်းများကိုမက်ထရိုဖြင့်သင်ရနိုင်သည်, Trocadero ဘူတာမှ.
3. ဗာဆိုင်းရှိ Latona စမ်းရေတွင်း
ရှိပါတယ် 55 ၏ဥယျာဉ်၌စမ်းရေတွင်း ဗာဆိုင်း, ဒါပေမယ့်အလှဆုံးနှင့်ထူးခြားပြောင်မြောက်သည့် Latona စမ်းရေတွင်းဖြစ်သည်. la Latona စမ်းရေတွင်းသည် Ovid's Metamorphoses အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်, Appollo နှင့် Diana တို့၏ Latona မိခင်, ဒီဘုန်းကြီးသောစမ်းရေတွင်း၌သူမ၏ကလေးများနှင့်အတူပုံဖော်.
Grand Canal ကိုရင်ဆိုင်ခြင်း, ဗာဆိုင်းရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို King Louis XIV ၏ရူပါရုံကိုသင်အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည်. မြင့်မားသောရာသီကာလအတွင်းပြုလုပ်သောစမ်းရေတွင်း၌ဂီတပြသမှုကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်သည်3တစ်ပတ်တစ်ခါ.
ဗာဆိုင်းနန်းတော်သည်ဗာဆိုင်းမြို့တွင်တည်ရှိသည်, ရုံ 45 ပဲရစ်ကနေရထားဖြင့်မိနစ်. သင်ရထားကို Versailles Chateau Rive Gauche ဘူတာသို့သွားနိုင်ပါတယ်. ထို့နောက်ဘူတာမှနန်းတော်နှင့်ဥယျာဉ်များသို့အနည်းငယ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်.
4. အဆိုပါ Efteling စမ်းရေတွင်း
ဥရောပရှိအထင်ရှားဆုံးဂီတစမ်းရေတွင်းပြပွဲသည် Efteling ဆောင်ပန်းခြံရှိဂီတစမ်းရေတွင်းပြပွဲဖြစ်သည်. သငျသညျအားဖြင့်မိန်းမောတွေဝေပါလိမ့်မယ် 12 မိနစ်အလင်းနှင့်ရေပြပွဲ, ဖားတွေကရေကိုလှပတဲ့ဘဲလေးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတယ်.
Aqunura စမ်းရေတွင်းစနစ်ကို Efteling အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည် 60 နှစ်ပတ်လည်နေ့. ကောက်ချက်ချရန်, ဂီတပြပွဲသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိသားစုခရီးစဉ်အတွက်အဆုံးဖြစ်သည် ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ Efteling.
အဆိုပါ Efteling စမ်းရေတွင်းသို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
ဤအံ့ဖွယ်ပန်းခြံသည်အမ်စတာဒမ်နှင့်တစ်နာရီသာဝေးသည်, ဒါကြောင့်ပျော်စရာမိသားစုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပါပဲ အမ်စတာဒမ်ကနေနေ့ကခရီးစဉ်.
5. 1ဥရောပတွင်အလှပဆုံးစမ်းရေတွင်းများ: Trafalgar စမ်းရေတွင်း
Mermaids နှင့် Tritons များသည် Trafalgar ရင်ပြင်တွင်အဓိကရုပ်ပွားတော်များဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, အခြားစမ်းရေနှင့်မတူဘဲ, ဒီပင်လယ်သတ္တဝါများ၏ရွေးချယ်မှုနောက်ကွယ်မှဒဏ္legာရီရှိပါတယ်. လန်ဒန်တွင်အလှဆုံးစမ်းရေတွင်းကိုမူလကတည်ဆောက်ခဲ့သည် 1841 ဆန္ဒပြသူတွေအတွက်နေရာ minimize လုပ်ဖို့.
Trafalgar Square စမ်းရေတွင်းကိုလန်ဒန်ရှိ National Gallery ရှေ့တွင်တွေ့လိမ့်မည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျလန်ဒန်ခရစ္စမတ်ပျော်စရာအဘို့အလာဘယ်မှာကြောင်းသိသင့်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျဥရောပ၌အလှဆုံးစမ်းရေတွင်းတတစ်ခုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်နောက်ထပ်ကြီးစွာသောအကြောင်းပြချက်ရပါလိမ့်မယ်.
လန်ဒန်ရှိ Trafalgar စမ်းရေတွင်းသို့ရောက်ရှိရန်?
လန်ဒန်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို Charing Cross ဘူတာသို့သင်သွားနိုင်သည်.
6. Innsbruck ရှိ Swarovski စမ်းရေတွင်း
Tyrol ဒေသသည်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏အလှပဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်, Swarovski ဌာနချုပ်၏အိမ်ဖြစ်သည်. Swarovski စမ်းရေတွင်းသည် Swarovski Crystal Worlds တွင်တည်ရှိသည်, အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အစားအစာတစ်ခုရှုပ်ထွေး. ဒါဟာအမှန်တကယ် crystal ဖန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်, Swarovski.
စမ်းရေတွင်းတစ်လုံးသည်လူတစ် ဦး ၏ ဦး ခေါင်းနှင့်တူသည်. ၎င်းသည်ဥရောပရှိအဆန်းဆုံးသောစမ်းရေတွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, သငျသညျသြစတြီးယားအတွက်တောင်တက်သောအခါနှင့်ကျိန်းသေသွားရောက်လည်ပတ်ကျိုးနပ်.
ဘယ်လိုရန်ရရန် Swarovski စမ်းရေတွင်း တွင် Innsbruck ရှိ?
သင်လုပ်နိုင်သည် ရထားခရီးသွား Innsbruck ကနေ Swarovski အထိတစ်နာရီမပြည့်.
Salzburg မှ Innsbruck ရထားစျေးနှုန်းများ
Oberstdorf မှ Innsbruck ရထားစျေးနှုန်း
Graz မှ Innsbruck ရထားစျေးနှုန်း
7. ဂျီနီဗာတွင် Jet Deau
ရေဂျက်လေယာဉ်, အင်္ဂလိပ်အတွက်ရေဂျက်လေယာဉ်, ဥရောပရှိအမြင့်ဆုံးစမ်းရေတွင်းဖြစ်ပြီးရောက်ရှိနိုင်သည် 400 မီတာ. အစပိုင်းတွင်, La Coulouvreniere ရှိဟိုက်ဒရောလစ်စက်ရုံ၏ဖိအားပိုများမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်စမ်းရေတွင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်မကြာမီအာဏာ၏သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်.
ထိုကွောငျ့, ဂျီနီဗာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ Jet Deau ကိုလွတ်သွားဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်. တကယ်တော့, မင်းဂျီနီဗာရေကန်ကိုသွားနိုင်တယ်, သင်ရိုးရိုးရေဂျက်လိုက်နာပါလျှင်.
Zurich မှ Geneva Train စျေးနှုန်း
8. Stravinsky စမ်းရေတွင်း, ပဲရစ်
Center Pompidou ရှိ Stravinsky စမ်းရေတွင်းသည်ရုရှားတေးရေးဆရာအတွက်အခမ်းအနားဖြစ်သည်, Igor Stravinsky. တောက်ပတဲ့အရောင်တွေ, လူရွှင်တော်, နှင့်အခြားအဓမ္မပန်းပုများကဤမတူကွဲပြားသောစမ်းရေတွင်းကိုဥရောပရှိအထင်ရှားဆုံးသောစမ်းရေတွင်းတစ်တွင်းဖြစ်စေသည်. ပန်းချီကားကိုပန်းပုဆရာ Jean Tinguely နှင့်ပန်းချီဆရာ Niki de Saint Phalle တို့တီထွင်ခဲ့သည်. နှစ် ဦး စလုံးအနုပညာရှင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရှိသည်: တ ဦး တည်းလက်မှာတစ် Dadaist စက်မှုလုပ်ငန်း, နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်တောက်ပ. ဒါကြောင့်, အတူတူ, သူတို့ရဲ့အလုပ်ဟာ ၂၀ ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးခေတ်မီဂန္ထဝင်ဂီတကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပါ.
သေချာပါတယ်, Stravinsky စမ်းရေတွင်းသည်သင်အနီးကပ်ကြည့်ရှုသောအခါသင်၏အာရုံကိုဖမ်းယူလိမ့်မည်. တကယ်တော့ဒါဟာကမ္ဘာကျော် Pompidou စင်တာရဲ့ဝင်ပေါက်မှာဆပ်ကပ်ဖျော်ဖြေမှုကိုသက်သေခံရတာနဲ့တူတယ်.
ငါဘယ်လိုရန် Get Stravinsky စမ်းရေတွင်း?
ဖောင့်ထရာဗင်နီစကီးသည် Pompidou စင်တာ၏ဝင်ပေါက်တွင်ဖြစ်သည်. သင်မက်ထရိုကို Hotel de Ville ဘူတာသို့သွားနိုင်သည်.
ဟန်ဂေရီတွင်အကြီးဆုံးစမ်းရေတွင်းသည်နာရီတိုင်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂီတနှင့်လေဆာပြပွဲကိုပြသသည်. အောက်တိုဘာအထိ, ဘူဒါပတ်စ်ရှိမာဂရက်ကျွန်းကိုသွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်. အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ရေနှင့်မီးပြပွဲများကိုသင်ကြည့်ရှုစဉ်ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲစားကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်.
Krizikova စမ်းရေတွင်းတစ်တွင်းကိုဖြစ်စေသောအခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခု 10 ဥရောပ၌အလှဆုံးစမ်းရေ, ကလေးတွေနှင့်လူကြီးများအတွက်ဂီတပြပွဲအစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ.
ငါဘယ်လိုရန် Get မာဂရက်ကျွန်းရေပန်း?
Margaret ကျွန်းစမ်းရေတွင်းကို Budapest မြို့လယ်ကရထားဖြင့်သွားနိုင်သည်.
10. ပရာ့ဂ်တွင် Krizik စမ်းရေတွင်း
ကခုန်စမ်းရေတွင်း, Krizik စမ်းရေတွင်း, ပရာ့ဂ်ရဲ့ပြပွဲစင်တာအနီးတွင်တည်ရှိသည်. မှစ 8 ညသန်းခေါင်အထိ, အကောင်းဆုံးမီးများနှင့်အကောင်းဆုံးဂီတများကိုသင်ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်. ရှိပါတယ်4တစ် ဦး ချင်းစီသည်ဂီတနှင့်အလင်းအိမ်များတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည့်အချိန်ကိုပြသည်.
Krizik ဂီတစမ်းရေတွင်း၌ဆောက်လုပ်ခဲ့သည် 1891 ပြပွဲစင်တာသည်. ဒါဟာအစဉ်အဆက်ကတည်းကလူအစုအဝေးဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. တစ် ဦး ပြပွဲနှင့်အတူညနေခင်းပရာ့ဂ်အတွက်အလွတစ်နေ့အကြီးအဇာတ်သိမ်းဖြစ်လိမ့်မည်.
Vystaviste ကိုဘူတာရုံသို့ရထားဖြင့်အလွယ်တကူ Krizik စမ်းရေတွင်းသို့အလွယ်တကူသွားနိုင်သည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဥရောပ၌လှပသောစမ်းရေတွင်းတစ်တွင်း၌သင်ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ blog post“ ဥရောပတွင်အလှဆုံးစမ်းရေ ၁၀ ခုသင်၏ site ပေါ်သို့? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-fountains-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, tr သို့ pl သို့မဟုတ် nl နှင့်သင်ရွေးချယ်သောအခြားဘာသာစကားများကိုအစားထိုးနိုင်သည်.
လှလိုက်တာ ဥရောပခရီးသွား စမ်းချောင်း ရေတံခွန် MusicalFountain ရထားခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား